အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသားဆုံ ဘီလီယံနာ 10ဦး -2021 - ONE DAILY MEDIA
နောက်ထပ် Covid-19 လှိုင်းလုံးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့နေပြီး စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ၁၂ သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံ၏စတော့ဈေးကွက်သည် အထွတ်အထိပ်အသစ်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ချဲ့ထွင်ရန် ၎င်း၏ကူးစက်ရောဂါကူးစက်မှုကို ပခုံးပြောင်းထားသည်။ Sensex ၏စံနှုန်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ကထက် 75% တက်လာသည်။ အိန္ဒိယ ဘီလီယံနာ စုစုပေါင်း အရေအတွက်သည် ယမန်နှစ်က 102ဦး မှ 140 ဦး သို့ တိုးလာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက ဒေါ်လာ ၅၉၆ ဘီလီယံအထိ နှစ်ဆနီးပါး တိုးလာပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ဘီလီယံနာ(10)ဦးစာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Mukesh Ambani – $84.5 Billion (မွန်ဘိုင်း)
Mukesh Ambani သည် ၎င်း၏ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အင်ပါယာကို တယ်လီကွန်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းကဲ့သို့သော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်နေသော ကဏ္ဍများသို့ အောင်မြင်စွာ ခွဲဝေပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ နေရာကို အာရှ၏ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး အသားတင်ကြွယ်ဝမှုမှာ ဒေါ်လာ ၈၄.၅ ဘီလီယံဖြစ်သည်။
2.Gautam Adani – $50.5 Billion
3.Shiv Nadar – $23.5 Billion (ဒေလီ)
4.Radhakishan Damani – $16.5 Billion ( မွန်ဘိုင်း)
5.Uday Kotak – $15.9 Billion (မွန်ဘိုင်း
6.Lakshmi Mittal – $14.9 Billion ( လန်ဒန်)\_
7.Kumar Birla – $12.8 Billion ( မွန်ဘိုင်း)
8.Cyrus Poonawalla – $12.7 Billion ( Pune)
9. Dilip Shanghvi – $10.9 Billion (မွန်ဘိုင်း)
10. Sunil Mittalနှင့် မိသားစု -$10.5 Billion (ဒေလီ)
ယခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ 2021ခုနှစ်အတွက် အိန္ဒိယရဲ့ အချမ်းသားဆုံး ဘီလီယံနာ ၁၀ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လည်း ကျွန်တော်တို့ One Daily Pageမှ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖို့လို့ Like and Follow ပြုလုပ်ထားပါအုန်းနော်
အမျိုးသားများ၏ ကျော်ကြားမှုနှင့် အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှ သူရဲကောင်း အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး